Bac kori, kori Teendho, Kori Xirmooyinka Iftiinka - Virex
Horudhac Alaabta Alaabada qaaliga ah:VIREX kora qaababka teendhada 600D shiraac culus, dahaarka mylar-ka ah ee aad u iftiimaya iyo jir bir ah oo adag; Waa biyo-celin, iftiin-celin, horayna loogu qalabeeyay soo saarista iyo hawo-qaadista; taas oo ka dhigaysa mid ku habboon wax kasta oo koraan guud. Dhisme Xoog Leh: Jirka birta ah waxaa lagu sameeyay tuubooyinka u adkaysta miridhku-culus iyo geesaha qufulka; Wax qalab ah oo loo baahan yahay ma jiro. Xakamaynta Iftiinka ugu badan: Daahan mylar waa mid aad u milicsan, la dhaqi karo, oo aan sun ahayn; waa bloc...
Horudhac Badeeco Teendhada Kobaca Virex waa hadka ugu fiican, iyadoo la isticmaalayo mylar aan biyuhu lahayn oo aad u milicsan si kor loogu qaado wax soo saarka teendhada kobaca kasta. Shiraac Premium 600D waa mid u adkaysta jeexjeexa oo labajibbaaran ayaa ka hortagaya dhammaan iftiinka inuu baxsado; Sharaca waxaa lagu xoojiyay ulo bir ah si loo hubiyo badbaadada iyo xasiloonida. Sibadaha tayada sare leh waxay teendhada ka ilaalin karaan daadinta iftiinka, hubinta adkeysiga iyo isticmaalka joogtada ah. Waxaan aad u dheereynaa si aan u hubinno in sibadahayada birta culus...
Horudhac Alaabta Farsamada iyo agabka aan la barbar dhigi karin ayaa ka dhigaya teendhooyinka mylar hydroponic doorashada ugu fiican ee beeraleyda xirfadleyda iyo hiwaayadda labadaba. Hawo-mareenno badan: hawo-mareenno wareegsan, xadhig la isku hagaajin karo, fududahay in la isticmaalo. Waxa kale oo jira daaqado yar oo cad oo leh shabag iyo cajalad sixir si fudud loo furo loona xidho. Hawo-mareenno badan ayaa fududeynaya in la rakibo qalab kala duwan oo hawo-qaadasho ah iyo sidoo kale hawo wanaagsan iyo marawaxada hawo-mareenka badan iyo soo-saarka shaandhada Milicsiga: 95% filim polyester-ka sare leh ...
Horudhac Badeeco Teendhada kobaca VIREX waxay xannibaysaa dhammaan baxsashada iftiinka waxaana lagu dahaadhay mylar milicsi si loo hagaajiyo wax soo saarka teendhada kobaca kasta; Zipper oo leh dahaarka madow waxay abuurtaa shaabad iftiin ah oo aan u baahnayn daboolo dheeraad ah iyo cajalad is-ku dhejisan. qaro weyn, waara: laba tol oo is-hortaag fiican oo iftiin leh; Waxaa lagu safay walxo PE-da oo aan sun ahayn, oo uga badbaado warshadaada, teendhada waxaa taageera tirar bir ah oo si gaar ah loo farsameeyay si loogu rakibo siman. Habayn degdeg ah:VIVO...
Hordhac Alaabta Qalab-la'aan ah oo degdeg ah: 40 * 40 * 120cm teendhada beeritaanka waa sahlan tahay in la rakibo, xitaa haddii aadan waligaa samayn wax la mid ah: qalab looma baahna; Farsamada iyo agabka aan la isku midka ahayn ayaa ka dhigaya teendhooyinka mylar-ka hydroponic doorashada ugu fiican ee beeralayda xirfadleyda ah iyo kuwa hiwaayadda leh ee hawo-mareennada kala duwan leh: hawo-mareenno wareegsan, xadhig la hagaajin karo, fududahay in la isticmaalo. Waxa kale oo jira daaqado yar oo cad oo leh shabag iyo cajalad sixir si fudud loo furo loona xidho. Hawo-mareenno badan ayaa sahlaya in la arko...
Horudhac Badeeco VIREX Grow Tent waxaa laga sameeyay 600D Oxford waxaana lagu safeeyay qalin PET mylar oo leh cabir milicsi oo ka badan 95%. Qalabka teendhada culus, xoojinta birta dahaarka cad, wadajirka waajibka culus ee madow ee ABS, badbaado iyo xasilloon. Naqshad albaab u qaabaysan, laba-jid oo labajibbaaran siiba caag ah oo waara. Meelo badan oo mataano ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu qaado filtarrada iyo taageereyaasha. Shaandhooyin cadcad waxa loogu talagalay inay ka caawiyaan wareegga hawada oo ay makhluuqa kale ka ilaaliyaan teendhada koraysa. Qalabka teendhada beeritaanka VIREX waxaa ka mid ah...
Full Spectrum LED Iftiin Waxtarka Waxtarka Sare ee Intell...
Horudhaca Alaabta VIREX LED Growth Lamps waxay kordhiyaan wax-soosaarka dalagga iyo badbaadinta tamarta oo leh iftiin sare oo iftiin leh, taasoo kaa caawinaysa inaad gaadho tayada iyo tirada ugu badan. Iftiin korriin la isku hagaajin karo iyo muuqaal buuxa, iftiinka iftiinka ayaa si xor ah loo hagaajin karaa marxalado kala duwan iyadoo loo eegayo baahida koritaanka dhirta, nalka ugu muhiimsan waa sahlan tahay in la xakameeyo, oo ku habboon beerashada ganacsiga iyo guriga. Looxa iftiinka waa la xidhay si aadan uga welwelin xaaladaha sii kordhaya ee qoyan
16/19/24 Sup warshadda caleenta caleenta inji...
Horudhac Badeeco VIREX koraan naqshadeynta teendhada waxay bixisaa milicsiga iftiinka koritaanka xooggan iyo qaybinta iftiinka, milicsiga sare, si dhirtaadu ugu baahan tahay iftiin badan. Laga sameeyay shiraac 600D ah, waa kuwo jeexjeexa u adkaysta, iftiin badan, adkaysi badan, badbaado badan, oo adiga iyo dhirtaadaba u abuura jawiga ugu wanaagsan ee koritaanka. Albaabka waa weyn yahay in laga soo galo oo laga guuro dhirta; Daaqada indho-indheynta, fiilooyinka habboon; Meelo badan oo wareeg ah, oo ku habboon cabbirrada kala duwan ee filtarrada taageere; Detachabl...
300*300*200 CM Koritaanka Joogtada ah ee Sanduuqa Teendhada Beerta Dibi...
Horudhac Product VIREX Teendho koraan raagaya: adabtarada xagal birta deggan iyo tiirka waa taageerada la isku halayn karo ee teendhada, si adag u taagan, miridhku xor, rinji free, degdeg ah oo fudud rakibaadda qalab la'aan. Jibbaarka birta culus ee Virex, oo leh dahaar madow oo laba jibaaran, ayaa ah kan ugu fiican suuqa ee abuurista shaabad khafiif ah oo adag. Saxaarada la rari karo waxa ay ilaalisaa nadiifinta sagxadaha: Xidhmada waxa ku jira saxaarad sagxeed oo biyuhu aanay ka bixi karin si ay u qabato qashinka caleenta. Saxaarada waa la go'i karaa, biyuhu ma celin karaan waana la saarayaa
1/8" Xadhig Ratchet Hanger Tayada Sare leh A P...
Hordhac badeecada 1/8 "xadhig culus. Culayska ugu badan: 150 LB/labo, 68 kg/labo. Waxyaabaha: naylon, zinc alloy, birta aan lahayn. Jiir kastaa waxa uu leeyahay awood rarid ilaa 150LB; Dhererka xadhigga -8 cagood. 4 si sahlan loo isticmaalo cajaladaha carabiner Waara, jeexan iyo miridhku u adkaysta, ujeedo badan leh Iska caabbinta ilmada, iska caabinta miridhku; Isticmaalka ujeedo badan. Haddii alaabtu u baahan tahay in hoos loo hagaajiyo, usha kantaroolka booska ee jilitaanka waa in la jiidaa ...
Seeding Kulul waara 48*20.75 inch PVC M...
Hordhac Alaabta Xirmooyinka kulaylka ee xirfadlayaasha ah ee VIREX waxay ku hayaan heerkulka ugu sarreeya 10-20 ° F ka sarreeya heerkulka hawada jawiga, oo ku habboon bilaabista abuur iyo faafinta jaridda Waara: jilicsan, dabacsan, aad u waara, xidhiidhka la xoojiyay ee u dhexeeya sariirta iyo xadhigga korantada, biyuhu, waxay ka dhigaysaa ammaan. xoqin nadiif ah oo xasiloon, xitaa kulayl, hubinta in sariirtan waara aysan gubi doonin xididdada dhirta. Saaxiibka ugu fiican ee dhirta: Ku habboon bilaabista geedo guga, jiilaalka, ama mar kasta oo dhirtaadu u baahan tahay...
20*20.75 Inj Dheriga kulaylka Seeding wuxuu caawiyaa jeermiga abuurka...
Seeding Kululaynta Mat 10*20.75 Inch IP 67 Biyo-mareenka
Horudhac Product VIREX darfaha kulaylka ee xirfadlayaasha ah waxay ku ilaalinayaan heerkulka ugu sarreeya 10-20 ° F ka sarreeya heerkulka hawada deegaanka, ku habboon abuurka iyo faafinta jarista Waara: jilicsan, dabacsan oo aad u waara, sax ah, xoojinta xiriirka ka dhexeeya barkin iyo xadhig koronto, biyuhu, awood Nadiifinta galbeedka nadiifinta nadiifka ah Xasillooni xitaa kulayl: Virex's Alloy Niki Rotal silig kululaynta iyo dahaaran dheeraad ah filimka PET hubisaa in sariirta raagaya ma guban doonaa xididdada ...
90CM*6 Lakabyada Shabakadda Qalalan Ayaa Lagu Go'i Karaa Hanger Ou...
Horudhac Alaabta Walaxda ilaalinta deegaanka: walxo aan biyuhu lahayn oo aan sun ahayn, giraanta siliga birta ku dhex dhisan, taageero adag. Naqshad la laabi karo: mesh qalalan oo si buuxda loo furay, awood weyn. Waxay isku laabtaa baakidh yar oo kaydin fudud. Mesh la neefsan karo: shabagyada neefsashada ayaa wareegta hawada oo si degdeg ah u engejiya alaabta. Naqshad qalajiyaha qalajiyaha, oo aad kuugu habboon inaad alaabta haysato. Naqshadaynta gaarka ah waxay kuu sahlaysaa inaad geliso ama ka soo saarto waxaad rabto inaad qallajiso, sidoo kale waxay ka hortagtaa dabayshu inay dhacdo...
Koritaanka Xirmooyinka Iftiinka Dhameystiran ee Guriga cagaaran ee Hydroponics...
Hordhac Alaabta VIREX kora xirmooyinka iftiinka waxay leeyihiin iftiin muuqaal buuxa oo ku habboon dhammaan heerarka koritaanka; Dareemaha iftiinka la hagaajin karo si loo hagaajiyo xoogga iftiinka; Dahaarka ilaalinta ee ledhku waxay caawiyaan kordhinta nolosha adeegga; Ma jirto taageere, ma jiro buuq. Iftiinkani waxa uu bixiyaa soo saarid iftiin xoog leh iyo dhexgalka dahaarka labbiska ah, taasoo keentay in dhalidda ugu badan. Teendhada beeritaanka rafaadka ah: Gudaha mylar ee milicsiga waxay kordhisaa doorka laambad beeridda; Shaqada culus 600D Oxford waxay raadinaysaa cimri dheeri; Jibbaar la isku halayn karo ayaa si siman u xidha...
Ka fogaanshaha heerkulka sare waa caqabad ay la kulmaan qaar badan oo ka mid ah beeralayda gudaha, inkasta oo dhibaatada siyaabo kala duwan wax looga qaban karo. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee aad ku ilaalin karto heerkulka saxda ah ee teendhadaada koraya si ay u koraan dhirta ugu fiican. Kaarboon dioxide Si fudud sida ay u dhawaaqdo, isticmaalka kaarboon laba ogsaydhku wuxuu noqon karaa mid ...
Waa kuwan nalalka aad u baahan tahay si aad u hesho dhir tayo leh wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah: Laydhka koritaanka rasaasta Aad bay u fududahay in la rakibo kuwa yaryarna waa fur oo ciyaaraan. Ka dib markaad ku dhejisid derbiga, waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee dhirta. Haddii aad rabto habayn fudud si aad u kordhiso wax-soo-saarkaaga dhirta, waa inaad iibsataa. In kasta oo ay kuleyl yar ku ordayaan, waxaad...